Maayarka cusub ee Gobolka Togdheer Cabdirisaaq Hero oo ka war bixiyey gobolka qoraal uu facebuugiisa soo dhigay. | Salaan Media
Maayarka cusub ee Gobolka Togdheer Cabdirisaaq Hero oo ka war bixiyey gobolka qoraal uu facebuugiisa soo dhigay.
July 8, 2021 | Published by: Hamse
Maalintii aannu xilka la wareegnay waxa laga joogaa 11 Maalmood. Muddadaas oo aannu casharro badan ka barannay gudaha iyo dibadda xarunta iyo shaqooyinka dawadda hoose, waxa aannu la kulannay arrimo qorshe iyo qabyarir u baahan. Maalin habeenba waannu shaqaynaynay oo marka ay ugu horrayso 10:00 PM ayaannu xarunta ka tegi jirnay. Ilaahay dedaalkaa maguma qasaarin oo wax badan ayaa saxmay muddadaas kooban.
Xilka muwaadinku waa inuu wixii xaq loogu eedahay bixiyo, amarka dawladdana qaato, maammulkuna waajibkiisa qabsado. Haddii se dawladdu aanay ku filnayn adeeggii muwaadiniinta, waa gobannimo weyn inay bulshadu qayb ka qaadato waxqabadka iyoa deegyada deegaankooda.
Isbeddelka aad naga rejaynaysaan ma aha sawir, rinji, iyo meel la xaadho ee waa tayo qurux adeeg, caafimaad kalsooni leg, waxbarasho tayaysan, bulsho dhaqan suubban, nabad sugan, deegaan bilicsan iyo nolol dhadhamisa macnaha dhabta ah ee dawladnimo. Shaqada nalaga sugayaa ma aha mid xilli gaar ah leh, ee waa qorshe sal leh oo si taxane ah ay u fulaan wixii la qorsheeyey. Ma doonaynayo shaqo qiiro, degdeg iyo igu sawir noqota ee waxay noqon doontaa waajibaad la iskula xisaabtamo.
Walaallayaal, keligayo kuma filnin baahida taallada degmada Burco ee waa hawl u baahan inaynu tamar iyo talaba isugu geyno. Annagu wax aannu ballanqaadnay inaannaan waxba hagran, idinkuna hiilka iyo hooda ha laga habsaamina annaga oo hubna gobannimadiinna.
Wax badan oo wanaag ah ayaannu qorshaynay, laakiin haddaan Cashuurta sannadlaha ah iyo tan maalinlaha ah la bixinnin tamarteennu way qabyoobaysaa. Waa hubaal haddii aynu xooggeena iyo xoolaheenna isu geyno inaynu isku filannahay iskuna filnaan doonno arrin iyo adduunba, waa se higsiigeenna ee aynu hareeraha qabanno.
Walaallayaal, aqoonta waa la iibsadaa ee daacadda iyo ammaanada midna lama iibsan kato. Ilaahay baannu dhaar ugu galnay xaqsoor iyo sinnaan inaannu ka xigno hawl kasta oo aannu qabanayno. Culayska xilkani leeyahay u biqi mayno oo kalsooni baannu isku qabnaa, laakiin cududdiinna ayay maanta xujadu taallaa.
Tallaabooyinla guusheenna furaha u ah ee aannu qorshaynay muddadan gaaban waxa ka mid ah;-
1-Maammul daaddejin (Decentralization)
Xarunta gudaheeda iyo waaxyaha degmooyinka ilaa xaafadaha, waxa aannu rejaynaynaa in muddo gaaban uu adeegga Dawladda Hoose gaadho, isla markaana uu xoogaysto xidhiidhka bulshada iyo xarumanaha DHB.
2-Dakhli kordhin iyo Kharash yarayn.
Dawladda hoose kharashkeeda ayaa %30 oa badan dakhligeeda. Sababtuna waa debecsanaanta cashuurta iyo habsanka dadweynaha. Annaga oo aan hore ugu hayn ayaannu 11 maalmood oo qudha ku bixinnay dhammaan gunnadii shaqaalaha, sidaa awgeed waxa aannu rejaynaynaa in bisha danbe uu dakhligu ka bato kharashka si loo abuuro madhaaricdii horumarinta Degmada.
Marag uma baahna in magaaladu qashinqub aanay waxba dhaamin. Wasa jirta inaanay hiliblayaashu Kawaanka waxba ku qalin ee magaalada dhexdeeda lagu gawraco xoolaha. Waxa ka daran in qashinka la soo dhigo duleedka magaalada ee aanay jirin meel lagu cidhibtiro wasakhda.
Waxaannu rejaynyaa in isbeddel weyn oo xagga gaadiidka, qalabka, dadka, shaqada, maammulka iyo goobta qashinka la geeyaaba uu dhici doono ee aanay noqon Burco ka qaad oo Burco ku qub.
Mahad weyn ayaannu u haynaa dhallinyarada gobta ah ee isu xilqaamay qabyada ay isu dhigeen inay qaban karaan iyo hawshaa wanaagsan.
Burco dhaanta tii Hore.